Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ahoana no hanasitranana ny tsy fahitan-tory sy ny anti-tebiteby?
Ny akondro dia mandresy ny tsy fahitan-tory sy ny fanahiana, nankatoavin'ny US FDA.
TCI Co., Ltd. dia efa ela no nirotsaka tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny hoditr'akondro sy ny stamens akondro, ary tamin'ny farany dia nandalo ny fankatoavana US FDA NDI tamin'ny tapaky ny taona, lasa NDI akondro voalohany eran-tany. Dingana iray manan-danja ho an'ny vokatra akondro any Taiwan ny hidirany eran'izao tontolo izao, ary manana vintana tsara kokoa izy io haka vola an'arivony tapitrisa dolara amin'ny sakafo ara-pahasalamana any Etazonia.
Ny TCI any Taiwan dia nanambara fa ny "Hodi-akondro, Stamen akondro" dia nahazo ny valin'ny fiarovana NDI momba ny sakafo fanampin-tsakafo vaovao an'ny FDA, ary nekena ho lisitra eo amin'ny tsenan'i Etazonia. Ity ihany koa no tranga voalohany eran'izao tontolo izao fa ny akondro ara-tsakafo vaovao manohitra ny fanahiana sy ny akondro ara-pahasalamana ho an'ny lehilahy vaovao dia nohamarinin'ny US FDA, izay antenaina hitondra ny indostrian'ny akondro ao an-toerana ary hiditra ao anatin'ny folo eran-tany. an'arivony tapitrisa dolara amin'ny tsenan'ny sakafo ara-pahasalamana. Ny hoditr'akondro sy ny stamens akondro dia ampiasaina any amin'ny firenena eoropeanina sy amerikanina, satria tsy nisy tantara momba ny sakafo sy ny akora mifandraika amin'izany taloha, na eo amin'ny fampiharana ny sakafo ara-pahasalamana na ny fampiroboroboana ny fanampiana ara-pitsaboana, dia sarotra foana izany. Taloha, ny hoditr’akondro, toy ny fako avy amin’ny fambolena izay nariana tany am-boalohany ary tsy azo ampiasaina ho fako an-dakozia fotsiny, dia novana ho akora fototra ho an’ny sakafo ara-pahasalamana eo ambanin’ny fivoaran’ny teknolojia matanjaka an’ny TCI.
Mitombo isan-taona ny isan'ny olona mijaly noho ny tebiteby sy ny fahaketrahana eto amin'izao tontolo izao. Ny TCI's original patented "Banana Peel Ultrasonic Cold Extraction", ilay akondro faly nalaina tamin'ny hoditr'akondro, dia manana akora mitovy amin'ny Prozac fanafody melancholic, izay afaka manatsara ny adin-tsaina, ny tebiteby ary ny tsy fahitan-tory. Ny fanadihadiana momba ny biby dia naneho fa ny fanangonam-boan'akondro am-bava dia hita fa manana asa manohitra ny fanahiana sy ny fahaketrahana amin'ny fanaraha-maso ny fihetsika. Nasehon'ny fandinihana ihany koa fa ny hoditry ny akondro dia afaka manatsara ny lalan'ny metabolism tryptophan mifandray amin'ny fanehoana ny fototarazo, mampiroborobo ny famokarana serotoninina sy melatonine ao amin'ny vatan'olombelona, ​​​​ary mahazo vokatra manamaivana ny torimaso. Ny famoronana Happy Banana dia nahazo mari-pankasitrahana iraisam-pirenena maromaro, anisan'izany ny mari-pankasitrahana manokana sy medaly volamena tamin'ny fampirantiana Geneva Invention tany Soisa.
Fanampin'izany, ny Happy Angel dia mampiasa stamen akondro, vokatra avy amin'ny akondro, izay afaka manakana ny fitomboan'ny prostaty. Ny fanadihadiana dia nanaporofo fa afaka mampihena tsara ny famokarana dihydrotestosterone ao amin'ny sela testicular ary manakana ny fihanaky ny sela prostate olombelona. Nandrombaka ny medaly volamena tao amin’ny Fampirantiana Famoronana Geneva ihany koa izy io. Satria efa nankatoavin'ny US FDA NDI ny hoditr'akondro sy ny stamen akondro, dia dingana iray lehibe ho an'ny vokatra ara-pambolena ao Taiwan ny hidirana eran'izao tontolo izao. Ny voka-pikarohana sy fampivoarana isan-karazany momba ny hoditr'akondro sy ny stamens akondro dia nitondra fandrosoana vaovao ho an'ny sakafo ara-pahasalamana, ary koa tamin'ny vanim-potoana taorian'ny areti-mifindra, nanome safidy bebe kokoa ny mpanjifa amin'ny sakafo ara-pahasalamana.